FAQs - Mandarin Chinese School Morning
Laakiin kama ay helin wixii loo raadinaya bogagga kale ee goobta? Jawaabta laga yaabaa in halkan ma aha, haddii aanay ahayn, mar walba na kuu soo diri kartaa su'aal degdeg ah. Waxaan mar walba tahay diyaar u ah inay caawiyaan si kasta oo aan awoodno.
Su'aal kasta oo ka tagay jawaabin? sidoo kale halkan waxaan ku leeyihiin qaar ka mid ah su'aasha ugu badan, laakiin haddii aysan ku filan in aad noo soo diri kartaa su'aal iyo waxaan isku dayi doonaa in aan ka jawaabo in markii ugu fiican ee ugu macquulsan.
Waan ogahay aad u yar oo ku saabsan Shiinaha. Mandarin Morning ii caawin karaa?
Mandarin Morning ajnebiga ah ku siiyaa buundo ah oo wuxuu galay dalkii dahsoon oo leh ee Shiinaha.
Waayo, kuwa u timid inaad Shiinaha oo markii ugu horeysay, haddii ganacsiga ama raaxo, nolosha noqon kartaa xad-dhaaf ah oo aan og deegaanka ama fahamka luqadda. wax fudud maalin kasta sida ku amro cuntada, qaadashada taksi, iyo weydiinaya tilmaamaha noqon kartaa niyad jab iyo mararka qaarkood wax aan macquul aheyn.
barnaamijyadda bilowga luqada Mandarin Intensive MandarinMorning ee ardayda siinayaa erayada iyo kalsooni si aad u hesho iyo ku raaxaysatid nolosha Shiinaha.
Maxaa dhigaya Mandarin gooni waa in dugsiga ma aha oo kaliya ardayda siinayaa top-uruursanayey qalabka afka Mandarin, laakiin sidoo kale iyaga siinayaa a Chinese "lammaane" oo saaxiib si ay u caawiyaan nooc kasta oo ah xaaladda.
Waa maxay magaalada Shanghai mid ah?
Shanghai waa magaalada ugu firfircoon ee Shiinaha iyo mid ka mid ah magaalooyinka ugu caadiga ah ee dunida! Waxaa jira hawlo badan oo xiiso leh in in ku dhow iyo Shanghai sameeyo - magaalo kumanyaal maqaayadaha, baararka, kooxaha, shopping, goobaha taariikhiga ah, iyo in ka badan. Waxaa ku sugnaa meel u dhow magaalooyin badan oo dhaqan hodan Shiinaha ee sida Suzhou iyo Hangzhou. Ha Mandarin Morning baraynaa magaalada mustaqbalka. Riix halkan si aad wax dheeraad ah oo ku saabsan waxa ay ka dhigeysaa Shanghai si weyn u bartaan.
Waa maxay heerka Chinese my?
Waxaad tijaabin kartaa heerka Chinese aad by qaadashada imtixaanka internetka ama jadwal balan si aad u booqato campus ah oo la kulmo takhtar takhasus leh. Riix halkan si aad u qaadan imtixaanka heer Chinese ah online. Natiijada imtixaanka online ku siin doonaa category a si gaar ah loogu talagalay heerka Mandarin.
Sidee ayaan isku diiwaan gelin kartaa koorsooyinka MandarinMorning?
Waxaad si fudud u buuxin kartaa arjiga internetka ama wac 021-52287809 oo ku takhasusay ayaa kaa caawin doonta.
Mudo intee leeg ayay qaadan doontaa ii si ay u bartaan Chinese?
Arday kasta barto isaga ama iyada u gaar ah orod, Si kastaba ha ahaatee ardayga MandarinMorning celcelis baran doontaa xirfadaha aasaasiga ah isgaarsiinta (akhriska, qoraalka, dhegaysiga, iyo hadalka) in 120 saacadood oo casharo. Tan waxaa ku jira erayo ka mid ah 1000 erayo iyo odhaaho. Ardayda buuxin kartaa heerka dhexe 180 saacadood ka dib. Tan waxaa ku jira erayo ka mid ah 1500 erayo iyo odhaaho. Ka dib markii heerka dhexe, ardeydu karaa meelo kala duwan oo sare Chinese (Business, Dalxiiska, Suugaanta, iwm) - heerka sare, ardayda horumarka-hayska.
Mandarin Morning ma bixiyaan fududeynta?
Haa. Waxa jira doorashooyin badan oo guryaha ee Shanghai - Nool dhaqanka Chinese-style in aalladda casriga ah guryaha galbeedka-style. Qiimuhu sida caadiga ah agagaarka RMB 6500. caadi Fadlan u soo dir email si MandarinMorning at info@mandarinmorning.com aad door bidayso iyo qof si deg deg ah dib ugu heli doontaa in aad la kala dooran karo, oo ay ku jiraan binta.
Xaggee MandarinMorning ku yaal?
MandarinMorning waa qalbiga Shanghai, magaalada ugu firfircoon Shiinaha ee. Xarumood waxaa haboon oo ku yaalla meel u dhow gaadiidka, shopping, iyo maqaayado. Wixii macluumaad faahfaahsan oo dheeraad ah oo ku saabsan helitaanka in campus MandarinMorning ah, riix halkan.
Imisa arday fasalka MandarinMorning?
Fasalo noqon doonaa ma ka badan 8 ardayda (isku celcelin 4 ama 5). MandarinMorning waa guul oo keliya haddii ardaydu ku bartaan oo wuxuu ku raaxaysan ay waayo-aragnimo. Iyadoo Fasalo yaryar, ujeedadu tahay si loo kordhiyo dareenka qof ahaaneed iyo in la yareeyo rabshooyin fasalka.
Markii aan qaadan karaa fasalka?
Ardaydu waxay fursad u ku biiro fasalka group on campus ah inta lagu jiro sida caadiga ah jadwalka koorsooyinka ama sameysan kartaa casharada gaarka ah waqti kasta. Email weydiimaha si info@mandarinmorning.com ama wac 021-52287809.
macalin ii xafiiska / guriga ku bari kara?
Koorsooyinka waxaa la bari karaa at campus MandarinMorning ah ama ardayga ka jeeclaadeen goobaha (guriga, xafiiska, ama wax kale).